I-China i-LEDD730740 I-Ceiling LED Dual Head Light Yokuhlinzwa Yezokwelapha enombani ophakeme abakhiqizi nabaphakeli | I-Wanyu
I-LEDD730740 Ceiling LED Dual Head Medical Medical Light ngamandla aphezulu ombani
I-LEDD730740 ibhekisele kuhlobo oluphindwe kabili lwesikhala sokuhlinzwa kwezokwelapha.
Ekamelweni lokusebenza nebhokisi lokuhlanza, uhlobo lwe-petal lungagwema ukuvimba ukugeleza komoya futhi linciphise kakhulu izindawo ezinesiyaluyalu ekugelezeni komoya okuyi-laminar. I-LEDD730740 ukukhanya kwezokwelapha okuhlinzekwa kabili kunikeza ukukhanya okukhulu kwe-150,000lux kanye nokushisa kombala okuphezulu kwe-5000K ne-CRI enkulu yama-95. Isibambo senziwe ngezinto ezintsha, ezingamelana nokushisa okuphezulu kanye nengcindezi ephezulu. Nikeza izingalo ezintathu zasentwasahlobo, ezishibhile, ezingabizi, ezisezingeni eliphakeme.
Izibhedlela ezizimele nezikahulumeni, amaLabhorethri, imitholampilo, njll.
1.Ihambisana neLaminar Flow Ukuhlanzwa
Uhlobo lwe-petal light lokuhlinza ngokwezokwelapha lungagwema ukuvimba ukugeleza komoya futhi linciphise kakhulu izindawo ezinesiyaluyalu ekugelezeni komoya okuyi-laminar.
Isiphathi sokukhanya sezokwelapha sokuhlinza sakhiwe ngokuphelele. Isibambo esikhiphekayo simelana nokushisa okuphezulu kanye nengcindezi ephezulu, ehlangabezana ngokuqinile nezidingo zansuku zonke zokubulala amagciwane.
2. Ukukhanya okuMhlophe okuMhlophe nokuPhuzi
Kusetshenziswa ama-light light aphuzi namhlophe, ukukhanya okuxubile, kuthuthukisa izinga lokushisa kombala kanye nenkomba yokunikeza umbala, futhi kusiza odokotela ukuhlukanisa phakathi kwegazi nezicubu.
3. Ukukhanya Okujulile
Ukukhanya kokuhlinzwa kwezokwelapha kunokubola okucishe kube ngama-90% ezansi kwenkundla yokuhlinza, ngakho-ke ukukhanya okukhulu kuyadingeka ukuqinisekisa ukukhanyisa okuzinzile. Lokhu kukhanya okuhlinza kabili kwezokwelapha kunganikeza ukukhanya okungafika ku-150,000 kuze kufike ekujuleni kokukhanyisa okungu-1400mm.
4. Uhlelo Lokuzivumelanisa Ne-Smart
Ukushisa kombala, amandla okukhanyisa kanye nenkomba yokunikeza umbala yokukhanya kokuhlinzwa kwezokwelapha kungashintshwa ngokuvumelanayo ngephaneli yokulawula ye-LCD.
Isibani esikhethekile se-endoscope singasetshenziselwa izinqubo zokuhlinza ezihlasela kancane.
5. Ukunikezwa Kwamandla Okunokwethenjelwa Okuthembekile
Ukunikezwa kwamandla okushintsha komkhiqizo owaziwa umhlaba wonke kusebenza kahle ebangeni le-AC 110V-250V. Ezindaweni ezinamandla kagesi angazinzile, siphinde sinikeze ezinye izindlela ezinamandla okulwa nokuphazamiseka.
6. Ukuzikhethela Okukhethwa kukho Kwezesekeli
Ngalesi sibani sokuhlinza esikhwameni sezingalo ezimbili, siyatholakala ngesilawuli sodonga, irimothi nesistimu yokubuyisela emuva ibhethri.
Ukukhanya Kokukhanyisa (lux)
Ithempelesha yombala (K)
Inkomba Yokunikezela Umbala (Ra)
Ukushisa kuya ku-Ratio Light (mW / m² · lux)
Ukujula Kokukhanyisa (mm)
Ububanzi be-Light Spot (mm)
Ubuningi be-LED (pc)
Ukuphila Kwesevisi ye-LED (h)
Langaphambilini I-LEDD740 Ceiling Mount LED One Head OT Light enesilawuli kude
Olandelayo: I-LEDD620620 Ceiling LED Dual Dome Medical Operating Light ngeWall Control
DL700 Halogen Ucingo Operating Theatre Khanyisa ...
LEDD740 Ceiling Mount LED One Head OT Khanyisa wit ...
Uhlobo lwe-LEDB620 Wall Type Lighting Lighting ye-LED ...
LEDL730 LED AC / DC shadowless Kuhlinzwa Khanyisa Fro ...
LEDB740 Wall Mount LED Operating Ithebula Khanyisa ...
I-LEDL740 i-LED engenasithunzi ye-OT Light ne-B ...